မြန်မာ မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအားမုန်းတီးသူများသို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Islam » မြန်မာ မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအားမုန်းတီးသူများသို ့
မြန်မာ မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအားမုန်းတီးသူများသို ့
Posted by moethuzar on Apr 26, 2012 in Islam, Science & Religion | 70 comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးရေချိန် မြင့်သထက်မြင့်လာနေသည်။ ယခင့်ယခင်က မွတ်စလင်မ်မုန်းတီး ရေး စာပေများကို အစိုးရနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်အဖွဲ ့အစည်းများက ဖြန် ့နေကြောင်း ကြားဖူးသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မတွေ ့ဖူးမမြင်ဖူးခဲ့။ အင်တာနက်ခေတ်စားလာသော ယခုခေတ်သယမတွင် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများ အားပုတ်ခတ်ရေးသားသော အီးမေးလ်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာများ၊ ကော်မန် ့များကို နေ ့စဉ်လိုလို မြင်နေ ကြားနေရသည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည် သူများကိုမေးခွန်းတချို ့မေးချင်သည်။ မေးခွန်းများ မမေးခင် ကျနော့်အကြောင်း ပြောပါမည်။
ကျနော်သည် မြန်မာပြည်တွင်မွေးဖွားသော မြန်မာပြည်သားတယောက်ဖြစ်သည်။ မနေ ့တနေ့ကမှမြန်မာပြည်သို့တိုင်းတပါးမှ ဝင်ရောက်လာသူမဟုတ်။ အိနိ္ဒယမှ ရွေ ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသော မိဘများမှမွေးဖွားသည်မဟုတ်။ အဘိုးအဘွားမဆို သူတို ့၏မိဘများပင် ဗမာနှင့် တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။
ကျနော်သည် မြန်မာ့မြေပေါ်မွေး မြန်မာ့မြေပေါ်တွင်ကြီး မြန်မာကျောင်းတွင် ပညာသင်၍ ဗမာ စကားပြောသည်။ ဗမာစာပဲတတ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်အတွက် မြန်မာလိုဝတ်သည်၊ မြန်မာပြည်ကိုချစ် သည်။ မြန်မာပြည်သည် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ မြန်မာလူမျိုးသည် ကိုယ့်လူမျိုးဟုခံယူသည်။
ကုလားစကားဟုခေါ်သော တောင်အာရှစကားများမတတ်။ ရေးလည်းမရေးတတ်၊ ဖတ်လည်းမတတ်ပါ။ အိန္ဒိယ လည်း မရောက်ဖူး၊ ဆွေမျိုးလည်း မရှိပါ။ အိနိ္ဒယနိုင်ငံရေး စီးပွားရေးလည်း ကျနော်နဲ ့လည်း မဆိုင်ပါ။ မြန်မာ ပြည်သာလျှင် ကျနော့် အမိမြေဖြစ်သည်။မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းစေချင်သည်။ ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်စေလို သည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာနှင့် ဗလီသွားတာပဲကွာသည်။ ကျန်တာကတော့ နေပူလည်းအတူတူ မိုးရွာလည်း အတူတူ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတက် လည်းအတူတူ၊ လုပ်အားပေး သွားရလည်း အတူတူဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲ မီးပျက်လျှင် ကျနော့်အိမ်တစ်အိမ်တည်း ကွက်ပြီး လျှပ်စစ်မီးမလင်းသကဲ့ သို ့နွေရာသီရေရှားလျှင်လည်း ကျနော့်အိမ်ရေတွင်း တစ်တွင်းတည်းကွက်ပြီး ရေမထွက်ပါ။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် တိုင်းပြည်တွင် ကျနော့်တစ်အိမ်တည်း အခွင့်အရေးထူးတွေမရပါ။
ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် – အစ္စလာမ်သာလျှင်မှန်ကန်ပြီး တခြားဘာသာတွေ မှားသည်ဟု တခါကမှ မပြောဖူး။ ယုံ လည်းမယုံကြည်ပါ။ ကျနော့်မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း စည်းရုုံးဝါဒဖြန့်နေသူများမရှိပါ။ ကျနော်သိသည့် မန်ဘာ ၃၀၀ဝ ကျော်ရှိသည့် အွန်လိုင်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူငယ်ဆိုရှယ်ဆိုဒ် တွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားပြီး အစ္စလာမ်ဝါဒ ဖြန် ့ချိနေသူများမတွေ ့ပါ။ ဘာသာတိုင်း သူ့အယူအဆ နှင့်သူဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားဘာသာများကို လေးစားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်နေထိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ ့ရှုရမည်ဖြစ်ကြောင်း အာပေါက်အောင် ပြောနေသူများသာဖြစ်သည်။ အများနည်းတူကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ကုလားဟုခေါ်ကာ နှိမ့်ချနေမှုများကို ရပ်တံ့ပေးရန် တောင်းဆိုနေသူများသာဖြစ်သည်။ ဘာသာမတူသူများအကြား နားလည်မှုရစေရန်၊အမုန်းတရားမပွားစေရန် ကြိုးစားနေသူများ လိုလားနေသူများဖြစ် သည်။
ကျနော်အပါအဝင် ကျနော့်မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အွန်လိုင်းတွင်သိကျွမ်းရသော မွတ်စလင်မ်သူငယ်ချင်း များထဲတွင် ရှင်ဂေါတမ ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ သံဃာတော်များ ၊ မယ်သီလရှင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာဝင်များကို နှုတ်နှင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်နှင့်ဖြစ်စေ နှိမ့်ချ စော်ကားနေသူများမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓ အမည်ခံ နိုက်ကလပ်များ၊ Rude Buddha ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်များကိုပင်မလုပ်သင့်ကြောင်း ယူဆသူများ၊ စိတ်မကောင်းသူများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်များကိုပင် ကန့်ကွက်ကြောင်းကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်များရှိပါသည်။ (စိတ်ဝင်စားပါက အွန်လိုင်းဆိုရှယ်ဆိုဒ်မှ မန်ဘာများ၏ ကော်မန် ့များကျနော့် ထံတောင်းနိုင်သည်)။
သို ့သော် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအား အမေနှမများကိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပုံများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နစ်နာအောင် အမျိုးမျိုး စော်ကားနေသည်ကို နေ ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ ့ရသည်။ ဘိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ ့ပါသည်ဆိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များပင် ရိုင်းရိုင်းပျပျ စကားလုံး ရင့် ရင့်သီးသီးများဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား လူမြင်သူထင် ဆဲဆိုနေသည်။
ဤမျှမက ဆုတောင်းဝတ်ပြုဆောင်များကို ဖျက်ဆီးသူများက တရားဥပဒေကင်းစွာဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်ကို ဝမ်းသာအားရ အားပေးအားမြောက်ပြု ရေသားပြောဆိုနေကြသည်။
ပြောဆိုနေကြသည်များထဲတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ အချက်အလက်မှန်များဖြင့် အပြုသဘောပြောဆိုသည်မဟုတ်ဘဲ စိတ်အထင်ဖြင့် ဘာသာစွဲဖြင့် အမုန်းတရား သက်သက်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှားတွေ ့နေရသည်။ အချို ့ဆိုရင်မွတ်စလင်မ်အကြောင်း မဆိုနှင့် မွတ်စလင်မ်မိတ်ဆွေ (သို ့) အိမ်နှီးချင်း (သို ့) အသိတယောက်မှ မရှိ ပေ။ ကြားဖူးနားဝဖြင့် အမုန်းတရားပွားနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို ့ကြောင့် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအား မုန်းတီးနေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူများသို ့မေးခွန်းများမေးချင်သည်။
(၁) သင့်တွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ် သူငယ်ချင်း (သို ့) အသိရှိပါသလား။ သင်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးပါသလဲ။
(၂) သင့်ကို သူက ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မှားနေပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ သာလျှှင်မှန်သည် ဟု စည်းရုုံးဖူးပါ သလား။
(၃) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓ သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို သင်သိသောမြန်မာမွတ်စလင်မ်တဦးဦးက ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ စကားလုံးအရေးအသားဖြင့်ဖြစ်စေ စော်ကားဖူးပါသလား။
(၄) သင်လိုအပ်နေချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို ့ဆိုကာ လျစ်လျူရှု ခွဲခြားဆက်ဆံခံရဖူးပါသလား။
ကျနော်ကြီးပြင်းလာသည့် မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အခြားဘာသာကိုစော်ကား စည်းရုံးနေသည့် လူများမရှိပါ။ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိပါ။ ကျနော် လိပ်ပြာသန် ့သည်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူသည် ကိုယ်တိုင် စော်ကားခံရဖူး လျှင်ဖြစ်စဉ် အချက်အလက်ဖြင့် ကျနော့်ထံ ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အများ စုဖြစ်သည့် အလယ်အလတ် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများနှင့် လက်တွဲ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖက်မှ ရပ်တည်ပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအား စော်ကားခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း၊ အချို ့စွပ်စွဲသည့် “လူမဆန်စွာ စည်းရုုံးခြင်း” ဆိုသည့်ပြသနာကို လက်တွဲ တိုက်ဖျက်မည်ဟု ကတိပေး သည်။
ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစော်ကားသကဲ့သို့ကျနော့်သာသနာနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည် သူများအား ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီးနေခြင်း၊ စော်ကားပြောဆိုနေခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းများကို ရပ်တံ့ေ
View all posts by moethuzar →
Muslim should not marry to Buddhism girls because they ever try their wives to enter to their Muslim religious. Muslim should also accept the Muslim girls to allow the marriage with Buddhism Men. For one example, See the Malaysia. It is not very restricted the Muslim law. But Ifaman (Buddhism ) want to marry the Muslim girl, he must first enter to Muslim.
” ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ” တဲ့
မေးခွန်းလေးက ကောင်းသားပဲ ။
ဘာသာရေး မို့လို့ မတို့မထိချင်ပေမယ့် ၊
မေးရဲတဲ့သူက မေးလာပြီ ဆိုတော့ ၊
အမေးရှိတော့လဲ အဖြေရှိရတော့မှာပေါ့လေ ။
ဒါပေမယ့် Comment လောက်နှင့် မလုံလောက်ပဲ ၊
Post တစ်ခုရေးတင်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ၊
အဘ မှာလည်း သင်္ဘောပေါ်မှာ အလုပ်တစ်ဖက်နှင့် ရေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
တစ်ရက် နှစ်ရက်တော့ စောင့်ပေးပါကွယ် ။
မြို့မေတ္တာတော့ ခံရချေသေးရဲ့ ။
ဆရာ နာနာ (သံတွဲ) ရေ ၊ အဘ ရဲ့ Post
” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂ဝ ) ( ဘာကြောင့် မုန်းနေကြသလဲ ) ”
မှာ နဲနဲ တို့ထိထားပါတယ် ။ အားပေးသွားပါအုန်း ။
အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ အကျိုးမဖြစ်ဘူး ……….. မြန်မာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သူတစ်ပါးကို အလကားနေရင်း မုန်းနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ အကြောင်းရှိလို့မုန်းတာပေါ့။ အဲ့ဒါကို ဘာလို့မုန်းတာတုန်း လာမေးနေရင် မေးတဲ့သူ တုံးအလွန်းတာပါပဲ။ ဘာသာခြားလို့မုန်းတာ မဟုတ်တာကိုတော့ အားလုံးသိပါတယ်။ မွတ်စလင်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ဘာသာဝင် အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေခဲ့ကြတာပဲလေ။ မွတ်စလင်အားလုံးမကောင်းဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများက မကောင်းကြလို့ နာမည်ဆိုးထွက်ရတာပါ။ အမုန်းခံရတာကို မကြေနပ်ကြရင် မမုန်းအောင်သာ နေကြပါ။
6. လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။ တဲ့….
သူကြီးဒါကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဖောက်ဖျက်ပြီး ဝင်မန့်တာ… မနိုင်တော့ရင်လဲ ဖျက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
သူကြီးလုပ်ပြီး ကိုယ့်စကားကိုယ်တော့ လေးစားသင့်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ဖျက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နာနာ (သံတွဲ) အနေနဲ့လည်း ဒီပို့စ်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်သာသနာကို ထိလာရင် ကာကွယ်ကြမယ့် သူတွေချည်းပါပဲ။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီထဲမှာ အငြင်းပွားနေကြတာ Green Rose အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ မိမိရဲ့ ဘာသာကို မိမိ စော်ကားနေသလိုတွေ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ တဖက်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမအောက်ကနေ လွတ်ထွက်နေပြီး ရိုင်းစိုင်းနေကြရပြီ။ သူပေးပေမယ့် ကိုယ်လက်မခံရင် ကိုယ့်ဆီကိုရောက်မလာပါဘူးး။
Muslim ဘာသာကိုတော့ Green Rose မသိပါဘူး။ Green Rose သိသလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ အမူအယာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့အောင် သွန်သင်ထားတာပါ။
MG အနေနဲ့ သူကြီးအနေနဲ့ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကို လက်မခံသင့်ပါဘူး။ ခုလိုမျိုး ဖြစ်နေတာတွေကို ဧည့်သည်ဝင်ဖတ်သွားလို့တောင် ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ Green Rose ရွာသူရွာသားတွေကို မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်ရွာသိက္ခာ ကိုယ်မှ မထိန်းရင် ဘယ်သူက ထိန်းမှာလဲ။ MG ရဲ့ Image ကို ထိခိုက်မှာမျိုးမို့ ရပ်လိုက်ကြပါတော့။
မွတ်စလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘက်က ရပ်ပေးမယ်လို့ကိုနာနာ(သံတွဲ)ပြောခဲ့တယ်နော် ဟုတ်ပီ ဒါဆို ရခိုင်အရေးမှာ လူမျိုးခြား ဘင်္ဂါလီတွေက ကျူးကျော်စော်ကားတာကို ဘယ်မွတ်စလင်တယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က ရပ်ပေးခဲ့လို ့လဲ သူတို ့ကတောင် ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က လိုက်ပြီးတော့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရသေးတယ်တဲ့ ကဲ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ဒီ့ပြင် အများကြီးပဲနော် ကျနော်မသိတာတွေ ကျနော်က ခုဖြစ်နေတာနဲ ့ချိန်ပြတာ ပြီးတော့ တခါမှတောင်မကြားဖူးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂါလီ)တွေက ရခိုင်က သူတို ့နယ်မြေပါ လုပ်သေးတယ် ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း မွတ်စလင်တွေ ဘယ်လောက်သောက်ကျင့်မကောင်းလည်း လူတော်တော်များများသိပါတယ် ကမာ္ဘကိုသတင်းတွေ လိမ်ပြီးတော့ သူတို ့သတ်တာတွေ၊ တခြားနေရာမှာဖြစ်တဲ့လူသေမှုတွေကို ကျနော်တို ့မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပဲ သတ်နေသယောင်လုပ်ကြံဖန်တီးတာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က ရပ်တည်ပေးတာလား ထပ်ပြောရင်လည်း ရိုင်းမိတော့မယ် ဒီလောက်ပဲကောင်းတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ ဖြတ်ပေးပါအဲဒါအကောင်းဆုံးပဲ သူကြီးရေ ဒီပို ့စ်ကို ဖြတ်ပေးပါဗျာ ဘာသာရေးပြသ၁နာတွေ ဒီထဲမှာတတ်ရင် မကောင်းဘူးဗျာ လေးစားစွာဖြင့်
အခုတော့. အမေရိကန်-မွတ်ဆလင်တွေကို.. အမေရိကန်စစ်စစ်တွေကပါ..မုန်းကုန်ပြီ…
Anti-Muslim group to run ads in New York subway
AFP-Sep 21, 2012
NEW YORK — Starting Monday, ads describing Muslim militants as … in the ad. The Southern Poverty Law Center, which monitors hate groups, …
.. တမန်တော်မိုဟာမက်ကို.. စော်ကားထားတဲ့.. ယူတုဗီဒီယိုတင်သူကတယောက်..
.. လက်တွေ့အသတ်ခံရတော့.. ယူအက်စ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်.. အာရတ်စကားပါတတ်တဲ့.. သံအမတ်…
.. အဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ဖူးတာလည်းမဟုတ်.. ဘာမှန်းမသိ.. ဆန္ဒပြအကြမ်းဖက်နေကြတာက.. အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံတချို့ကမွတ်ဆလင်ထုကြီး..
အနောက်နိုင်ငံနဲ့.. ယူအက်စ်အစိုးရက.. သူတို့အပေါ်ပုံကျနေတဲ့.. မွတ်ဆလင်တွေရဲ့.. ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအဆက်.. အမုန်းကို.. အေးချမ်းတည်ငြိမ်နေသေးတဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ)ဆီအပေါ်… လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကြိုးစားနေဟန်ရှိပါတယ်..။
ချိုင်းနား၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား. စတဲ့နိုင်ငံတွေက.. စီးပွားရေးလှိမ့်လုပ်ပြီး.. စူပါပါဝါတွေဖြစ်လာကြပြီလေ…။
ဂျူး.. ခရစ်ယန်နဲ့..မွတ်စလင်နဲ့က.. ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲနဲ့.. အသေအကျေဖြစ်ခဲ့တာပဲ..
ဟိန္ဒူနဲ့..မွတ်ဆလင်လည်း.. လွတ်လပ်ပြီးစ အိနိ္ဒယတိုင်းပြည်၃ပိုင်းကွဲတဲ့အထိ… ဖြစ်ခဲ့တာပဲ..
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့က.. ဒီနောက်ပိုင်းရာစုနှစ်တွေထဲ.. ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်သေး…
( တကယ်တော့.. သည်းခံသည်းခံနဲ့.. ရှေးပါကစ်စတန်၊ ရှေးအာဖဂနစ္စတန်ဒေသတွေက.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ.. ကျရှုံးကုန်တာ… )
မြန်မာပြည်ဟာ.. ဒေသန္တရအရ.. အင်မတန်အရေးပါတဲ့.. နေရာမှာရှိနေတယ်..
တိုင်းပြည်နာမယ့်.. ကိစ္စတွေ.. အဖတိုင်းပြည်..အမိတိုင်းပြည်.. ဧရာဝတီ.. (တကယ်)တကယ်ချစ်ကြရင်…အရှည်ကိုကြည့်ပြီး(အရှည်ကိုကြည့်ပြီး) ရှောင်ကြပါစို့…။